Xildhibaano Mooshin Xilka Qaadis Ah Ka Diyaariyey R/W Xasan Cali Kheyre & Xaalada Oo Meel Xun Gaartay | jubbaland news
Xildhibaano Mooshin Xilka Qaadis Ah Ka Diyaariyey R/W Xasan Cali Kheyre & Xaalada Oo Meel Xun Gaartay
Jun 19, 2017 - Aragtiyood
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Xildhibaano badan oo katirsan dowladda Soomaaliya ay wadaan qorshe mooshin looga keenayo Ra’isul Wasaare Kheyre iyo Xukumadiisa.
Kulamo aan caadi aheyn ayaa maalmihii lasoo dhaafay magaaladda Muqdisho uga soconayay xildhibaano katirsan barlamaanka labada gole kuwaas oo doonaya iney xukumada ugu yeeraan marka uu kulanka Barlamaanka furmo.
Inkastoo xukumadda RW Kheyre ay dadaal badan ku bixisay iney dajiso siyaasad cusub oo ku aadan la dagaalanka masuq maasuqa iyo soo celinta amaanka, hadana xildhibaanada ayaa ku doodaya ineysan waxba qaban.
Shaqsiyaad caan ah oo katirsan barlamaanka horeyna uga mid ahaa musharaxiinta xilka madaxweynaha ayaa lasoo sheegayaa iney si weyn uga dhex muuqdaan olalahan ka dhanka ah xukumadda Kheyre.
Sababaha ugu badan ee looga soo horjeedo xukumadda Soomaaliya ayaa ah go’aankii dhex dhexaadnimada ahaa ee ay dowladu ka qaadatay khilaafka wadamada Khaliijka, waxaana ay doonayaan in xariirka loo jaro dalka Qatar.